बलात्कृत हर्षिकाको यस्तो संघर्ष ! - Glamour Nepal
बलात्कृत हर्षिकाको यस्तो संघर्ष !
काठमाडौं । व्यवसायी तथा गीतकार अस्मिता सुमार्गीको नयाँ गीत ‘मेरो बाबा’ सार्वजनिक भएको छ । कुशे औशी अर्थात बुबाको मुख हेर्ने दिनको अवसर पारेर राजधानीमा आइतबार गीतको भिडियो सार्वजनिक गरिएको हो । विश्व नेपालीको स्वर तथा संगीत रहेको गीतमा हर्षिका श्रेष्ठ र शिव श्रेष्ठ प्रमुख भूमिकामा फिचरिङ गरेका छन् ।
गीतकार अस्मिताले गीत आफ्नो बाबालाई समर्पित गरेर लेखेको बताइन् । ‘बाबा आमा विना आफ्नो अस्तित्व हुँदैन । यदि उहाँहरुले जन्म नदिनुभएको भए म यो स्थितीमा हुने थिइनँ । त्यहीँ बाबा आमाको प्रेमलाई देखेर उहाँलाई समर्पित गर्दै यस गीत लेखेकी हुँ ।’उनले भनिन् ।
युवराज वाइवाको निर्देशनमा तयार भएको भिडियोमा एन्जल गुप्ता र दिपेन गौतमको पनि अभिनय छ । भिडियोमा कलेज जाँदा बलात्कृत भएकी हर्षिकाले घरमा आएर शिवको सल्लाहमा प्रहरी बनेपछि आफूलाई बलात्कार गर्ने दुई युवकलाई पक्राउ गरेको दृश्य देखाइएको छ । भिडियोमा उत्सव दाहालको छायांकन र निशान घिमिरेको सम्पादन छ ।
द भ्वाइस अफ नेपाल-३ का विजेता किरण गजमेरलाई गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रवेश गर्न नदिएपछि उनी त्रिुभवन...
गायक सुनिल गिरीको ‘को होला त्यो’ बोलको गीतको फिमेल भर्सनको भिडियो रिलिज भएको छ। फिमेल भर्सनको यो गीतमा...
नेपाली लोक गीतको बजारमा संधै नयाँ-नयाँ लोक खुराक दीईरहन माहिर मानिएका गायक अभय ढुंगेलले पछिल्लो समय फरक...
गीतकार हिराकाजी थापा निर्देशित म्युजिक भिडियो ‘काँडा’ हालै नयाँ यु ट्युव च्यानल ‘HANG ENTERTAINMENT’ मार्फत रिलिज गरिएको...
गायिका दिपा लामाको गीत "हजार खुशी"को म्युजिक भिडियो दुबईमा छायांकन गरिएको हो। भिडियो छायाँकन तथा निर्देशन रोहित बिक्रम कार्कीले गरेका हुन्। भिडियोमा मोडल अमित सापकोटा र दिप्ती महतले अभिनय गरेका छन।
उमेर ३० नाघ्यो? अझ राम्री देखीन यसरी गर्नुहोस् स्किन...
यौन असन्तुष्ट पुरुषहरु सँग सम्बन्ध बनाउने सुन्दरी